Lavazza Idola Kofi Muchina - Dhizaini magazini
Chishanu 29 Gumiguru 2021
Kofi Muchina Mhinduro yakakwana yevanoda kofi vanotsvaga chaiyo chiitiko che Espresso chiitiko kumba. Iyo inobata inobata mushandisi inosangana neacoustic mhinduro ine sarudzo ina uye yekudziya inosimudzira basa inopa iyo tora yakagadzirwa ruzivo kune yega yega kuraira kana chiitiko. Muchina uyu unoratidza kushaikwa kwemvura, svutugadzike yemidziyo kana kuti zvinodikanwa zvekudzikira kuburikidza neyekuwedzera yakavhenekerwa zvidhori uye dhirakiti ye Drip inogona kugadziriswa nyore. Dhizaini ine mweya wayo wakavhurika, kunaka kwemhando yepamusoro uye kudhirowa tsananguro ndeyekuchinja kwemutauro weLavazza wakagadzwa.
Zita rechirongwa : Lavazza Idola, Vagadziri zita : Florian Seidl, Izita remutengi : Lavazza.
Imba yemidziyo dhizaini
Osoro Yakavhurika Tafura Sisitimu Svondo 28 Mbudzi
Coca-Cola Tet 2014 Kuputira Zvokunwa Zvakapfava Mugovera 27 Mbudzi
5 Elemente Label Yewaini Chishanu 26 Mbudzi
Gunyana 2021 (90)
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Svondo 28 Mbudzi
Dhizaina ngano yezuva Mugovera 27 Mbudzi
Dhizaini yezuva Chishanu 26 Mbudzi
Mugadziri wezuva China 25 Mbudzi
Dhizaini timu yezuva Chitatu 24 Mbudzi
Kofi Muchina Florian Seidl Lavazza Idola